IPhone-ka badmareenka ayaa ka badbaaday 6 maalmood badda hoosteeda | Wararka IPhone
IPhone-ka badmaaxiinta ayaa ka badbaaday 6 maalmood badda hoosteeda
Ignacio Sala | | iPhone X
Maaha markii ugu horreysay, mana noqon doonto tii ugu dambeysay, ee aan ka hadalno iska caabbinta ay taleefannada casriga ah qaarkood ku bixiyaan suuqa Markay ku qarqiyaan biyaha hoostooda, oo aanan ula jeedin baaldi biyo ah si aan u sameeyo qaar ka mid ah tijaabooyinka fudud si loo xaqiijiyo shahaadada ay soo-saarayaashu ku bixiyaan xarumahooda.
Maanta waa markabkii iPhone-ka, gaar ahaan iPhone X ee badmaaxe kaas oo, inta lagu gudajiro howlaha nadaafadda saaran markabka, tan waxay ku dhacday qoto dheer 15 mitir. In kasta oo uu markii hore isku dayay inuu soo celiyo, haddana wuxuu ku khasbanaaday inuu sugo inta ay soo baxayaan ka hor inta uusan mar kale qabsan.
Markii ugu dambayntii mawjaddu baxday 6 maalmood ayaa laga soo gudbay, iPhone wali wuxuu ku shaqeynayay 3% batari oo waxaa ka buuxay dhoobo. Mulkiilihii aaladda ayaa meesha ka saaray dhamaan ciiddii dabooleysa Terminalka, oo ay kujirto dekedda wax rarta wuxuuna sugaayay inay qalasho. Nasiib wanaagse Ben Schofield, milkiilaha taleefanka, ciida lama soo marin dekedda rarka ee ku jirta gudaha terminalka, taas oo u geysan lahayd dhaawac aan laga soo kaban karin terminalka.
Shahaadada ay Apple ka mid tahay, IP67, waa mid la mid ah kuwa aan ka heli karno inta badan boosteejooyinka-dhamaadka sare ee hadda laga helo suuqa, shahaado damaanad qaadaysa in taleefanka uu sii shaqeyn doono haddii aan ku quusinno si qoto dheer 1 mitir 30 ilbidhiqsi.
Nasiibka uu Ben ku helay iPhone X, waa kiis hal milyan ku jira, laakiin way fiicantahay in la ogaado taas, mararka qaarkood, shahaadada ilaalinta biyaha iyo boodhka ay soo saarayaasha qaar noo fidiyaan, iyadoo kuxiran xaaladaha dhacaya, iyaga waxay u oggolaan kartaa inay ilaaliso. Waxay u badan tahay, inuu terminalku ku dhacay aag dhul ah, dhul si dhakhso leh u socda daboolay terminal-ka oo dhan, oo ay ku jiraan dekedda rarka iyo ka hortagga biyaha inay soo galaan gudaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » IPhone-ka badmaaxiinta ayaa ka badbaaday 6 maalmood badda hoosteeda
Ma aaminsani, sanadkii la soo dhaafay safarkaygii xagaaga ee Thailand waxaan ku dhacay shil nasiib daro ah iPhone X, waxaan kireystay kayak in kastoo ay iibiyaan iPhone-ka sida biyuhu u galaan, waxaan iibsaday kiis aan ku ilaaliyo, mar biyaha dhexdeeda. markabka dushiisa, mawjad ayaa isoo rogtay oo waxaan ku dhacay biyaha, dhowr saacadood ka dib, anigoo durbaba dhulka jooga, waxaan ogaaday in ilaaliyaha uusan si sax ah u xirmin oo xoogaa biyo ah ay soo galeen, BIYO AAD U YAR iyo iPhone-ka ayaa damiyay dib dambe uma shidnayn, waxay ahayd inaan tago Madrid si aan u qaado si aan u taageero oo wali damaanad qaade, waxaan layaabay iphone inuu jabay maxaa yeelay biyo ayaa galay Apple-na iima jawaabin taasna waa inaan iibsadaa mid cusub . Marka waxaan ka weydiinayaa qodobkaan khibradeyda.
Nasiib buu lahaa, sidaan ku sharraxay maqaalka.
Jawaab Ignacio Sala
Sida loo isticmaalo Sawirka Sawirka (PiP) ee iPhone-kaaga [Muuqaal]
Ka dib guushii Greyhound, Apple waxay dooneysaa inay sii wado bixinta "blockbusters" barnaamijkeeda